Momba anay-Ningbo Joiwo porofo mipoaka Technology Co., LTD
MOMBA NY orinasantsika
Ny orinasan-tsika dia nafindra tany amin'ny tranokala vaovao tamin'ny aprily 2012 miaraka amin'ny velaran'ny famokarana 4,500 metatra toradroa ary milina famokarana sy fanodinana maoderina. Ny orinasanay dia manana ny fahaizan'ny R&D, ny famokarana, ny fivoriambe, ny fitsapana, ny fametrahana ary ny serivisy teknika. Manaraka ny fitsipika "centric-centric" izahay ary manaraka hatrany ny fiaraha-miasa stratejika maharitra miaraka amin'ny mpanjifantsika, miezaka ny ho mpisava lalana amin'ny sehatra ary hamorona ny marika kilasy voalohany.
Ny fotoana voalohany hanomezana anao vahaolana matihanina.
Miasa orinasa manerantany izahay ary ny fifantohanay dia any amin'ny faritra eropeana, azia ary afrika ary amin'ny fananganana fifandraisana matanjaka amin'ny mpanjifanay. Na izany aza, ny isan-karazany amin'ny vokatra dia mivoatra hatrany mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifanay.
Quotation haingana sy serivisy santionany.
Atrikasa fanodinana faharoa